ခရီးသွားလုပ်ငန်းထဲက S တစ်လုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခရီးသွားလုပ်ငန်းထဲက S တစ်လုံး
ခရီးသွားလုပ်ငန်းထဲက S တစ်လုံး
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Dec 27, 2012 in Creative Writing, Think Different | 30 comments
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်က ညနေဘက်ရုံးဆင်းတော့ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်မှာ လမ်းကူးရင်းနဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်း လှည်းတန်းမီးပွိုင့်ဆိုတာ ကြာတဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ကုန်းကျော်တံတားစီမံကိန်းကြောင့် လမ်းဖြတ်ကူးစရာနေရာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ တစ်ခုတည်းသောမီးပွိုင့်ကလည်း ခြေလျင်လမ်းကူးတဲ့သူတွေအတွက် အခွင့်အရေးလုံးဝမပေးတဲ့အတွက် ကားတွေကြားထဲမှာ အသက်လုပြီး ကူးကြရပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကားရှင်းတုန်း လူအုပ်ကြီးနဲ့ရောပြီး လမ်းကူးလာတဲ့အချိန်မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက လမ်းလယ်ခေါင်တည့်တည့်ကြီးမှာပါ။
အင်းစိန်လမ်းဘက်ကနေ ကွေ့ကြောယူထားပြီးစောင့်နေတဲ့ အငှားကားကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လမ်းလယ်ခေါင်မှာ အပြေးတစ်ပိုင်းငှားပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကမန်းကတန်းပဲ သူနဲ့ပါလာတဲ့လူကို ကားပေါ်အရင်ပေးတက်ပြီး သူက နောက်ကလိုက်တက်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်မတစ်ယောက် လမ်းကူးနေရင်းနဲ့ တုံ့ကနဲရပ်ပြီး ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း ဘ၀င်မကျတဲ့ခံစားချက်မျိုး ခံစားလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်မခေါင်းထဲမှာ အတွေးပေါင်းများစွာ ရောက်လာပါတော့တယ်။
နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းလောက်တုန်းက ကျွန်မတုိ့ရုံးက အလည်အပတ်ပို့ပေးလို့ ဘန်ကောက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ကောက်ရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ Sex ကို တရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ လုပ်ခွင့်ပေးထားတာ အားလုံးလည်း အသိပါပဲ။ အဖြူတစ်ယောက်နဲ့ ထိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက် တွဲသွားတာကို နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်သူကမှလည်း အထူးတဆန်း ကြည့်မနေကြပါဘူး။ သူတို့ကလည်း အေးဆေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက စည်းကမ်းရှိကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တရားဝင်အလုပ်တစ်ခုကို ရဲရဲဝံ့ဝံလုပ်နေကြတဲ့ပုံပါ။ ခရီးကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်မကပဲ သတိထားမိတာလား မပြောတတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် တွဲသွားတာကို မကြာခဏမြင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်မြင်ကွင်းကြီးကတော့ တော်တော်ကို အကျည်းတန်လွန်းပါတယ်။ လူပေါင်းများစွာကြားထဲမှာ လမ်းစည်းကမ်းကို ပေါ်တင်ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို ဖူးဖူးမှုတ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေကိုယ်စား တော်တော်လေးရှက်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတွေးမိသလောက်လေး နည်းနည်းလောက်ပြောချင်ပါတယ်။
တံခါးဖွင့်ဝါဒကို ကျင့်သုံးနေတဲ့၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်တဲ့၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများက စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားသားတွေများစွာ ၀င်ရောက်လာပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်မတို့လူမျိုးတွေ လူမျိုးအမြိုမခံရဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားဆိုတာကို အထင်ကြီးပြီး ကိုယ့်လူမျိုးသိက္ခာကျစေမယ့် အပြုအမူတွေမလုပ်မိဖို့၊ “မြန်မာဆိုတာ အလကားပါကွာ…မြန်မာမတွေက လွယ်ပါတယ်” ဆိုတာမျိုး အပြောမခံရဖို့ အစစအရာရာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ပေးအခြေအနေအရ ပြည့်တန်ဆာအလုပ်ကို လုပ်နေရသည့်တိုင်အောင် ကိုယ်တစ်ဦးတည်းကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အထင်သေးမခံရဖို့ ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဆိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံလို တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရင်ရော ဘာဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ တရားဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ လိုင်စင်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူအနိုင်ကျင့်တာကိုမှလည်း မခံရတော့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေလည်း ပုံမှန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ကျီးလန့်စာစားနေရတဲ့ဘ၀ကလည်း လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေကိုတော့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတပြည့်စုံဖို့၊ စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်ဖို့၊ အသိဥာဏ်ရှိဖို့၊ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မထိခိုက်စေဖို့၊ သင်တင့်တဲ့ပညာရေးအခြေခံနဲ့အတူ ရင်ပေါင်တန်းပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ဖို့ စသဖြင့် လေ့ကျင့်မှုကောင်းကောင်းပေးဖို့လိုမယ် ထင်ပါတယ်။
ထပ်ပြီးတွေးမိသွားတာက အဲ့ဒီလိုပေးလိုက်ပြန်ရင်လည်း ဧည့်လမ်းညွှန်တွေရဲ့ကဏ္ဍ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်လားပေါ့။ တော်ကြာ လာသမျှနိုင်ငံခြားသားတွေကလည်း ဒါမျိုးတွေကိုပဲ သဘောကျ၊ မြန်မာမိန်းကလေးတွေကလည်း တရားဝင်ဆိုတာနဲ့ ဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကြ၊ အဲလိုမျိုးများ ဖြစ်လာရင်လည်း မလွယ်ဘူးဆိုပြီးပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ မမီမကမ်းဥာဏ်နဲ့ လျှောက်တွေးကြည့်နေတာပါ။ ရွာထဲကသူတွေရဲ့ အမြင်တွေကို သိချင်လို့ ရေးလိုက်မိပါတယ်။ လောလောဆယ် ကျွန်မကတော့ နိုင်ငံခြားသားဆို အထင်ကြီးပြီး ပစားပေးတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့တွဲရတာကို ဂုဏ်ယူတတ်ကြတဲ့ တစ်ချို့သော အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်မသက်မသာခံစားနေရပါတယ်လို့…
အရက် လောင်းကစား နဲ့ လိင်ကိစ္စ ဟာ
ဘာသာအသီးသီးက ဘုရားတွေ မမွေးခင်ကတည်းကလည်း ရှိတယ်
ဘုရားတွေ သေလွန်ပီးကုန်တော့လည်း မကွယ်ပျောက်သွားဘူး
အဲ့ဒါကို ယဉ်ကျေးမှု ကွန်ချာကြီး အုပ်ပြီး ထိန်းလို့တော့မရဘူး
အခွန်-ကျန်းမာရေး-တရားဥပဒေ ဒီသုံးခုနဲ့ ထိန်းမှ ၀င်း-၀င်းဖြစ်မယ်ဆိုတာ
အဘတို့ သိအောင် ပြောပြပေးပါဗျာ…
လုံးဝ (လုံးဝ)သဘူတောပါတယ် ဂီဂီရေ… ဘယ်လိုမှမကွယ်ပျောက်နိုင်တဲ့အရာကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်တာ အကောင်းဆုံးနည်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…
ဒီနေ့ပဲ Myo Set ရေးတာလေးဖတ်မိတယ်။
သူ့အမြင်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ :hee:
အဆိုးအကောင်းဒွန်တွဲနေတော့လည်း ပြောဖို့ခက်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ လုပ်မယ့်အစား တရားဝင်လုပ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်… မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့…
ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ လမ်းမှားရောက်ကုန်ပြီး နိုင်ငံသိက္ခာကျမှာလည်း စိုးသေးတယ်..
အမျိုးသမီးတွေ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ တွဲသွားတိုင်းတော့ sex အတွက်လို့ မယူဆစေချင်ပါဘူး။
တစ်ချို့တွေဟာ လုပ်ငန်းသဘာဝအရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး သွားလာ ကြပါတယ်၊ အဲဒီသူတွေ သွားလာကြတာ လုပ်ငန်းအရကလွဲရင် ဘာမှမရှိတာတွေ ရှိကြသလို ဧည့်လမ်းညွှန် မိန်းကလေးတွေလည်း နိုင်ငံခြားသားနဲ့ တွဲတိုင်း ဘာလိုလို မတွေးသင့်ပါဘူး၊ တစ်ခါတလေကျ ရှေးရိုးဆွဲ ဗျိုင်းကောင်းကျောက်ပိတွေကို ခ၀ါချသင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။
မယူဆပါဘူး လေးလေးရေ..ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းသဘောတရားအရ တွဲသွားတာ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်တာနဲ့ ဘာလိုလိုနဲ့က နည်းနည်းတော့ သိသာပါတယ်…
အဓိကပြောချင်တာကတော့ အဲ့ဒီဘာလိုလိုတွေက ဒီအတိုင်းဘာလိုလိုမနေဘဲ လူကြားသူကြားထဲမှာ အဖြူတွေကို အမွှန်းတင်ပြီး ပစားပေးတာမြင်ရလို့ စိတ်မသက်သာလို့ပါ…
အဲဒီ S တစ်လုံးကိစ္စ ဘယ်လို ပြောရမယ်မှန်း မသိဘူး။
တရားဝင်ခွင့်ပြုရင် ကောင်းတာ ရှိသလို ဆိုးတာလည်း ရှိလာမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ.. ခွင့်မပြုရင်လည်း ကြားပွဲစားတွေပဲ အမြတ်ထွက်တယ်…
ဘယ်လိုမန်းရမှန်းမသိလို့ ဘာမှထွေထွေထူးထူး မမန်းတော့ပါဘူး
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ မိုဘိုင်းရေ…
မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းထဲမှာ အဲဒါပါတယ်
ဒီကိတ်စကို ရွာထဲကလူတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့၊ စာတစ်ပုဒ်စီဦးမယ်
မွန်လေး ကြောင့် အိုင်ဒီယာရသွားတာမို့၊ ခြစ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ပါမယ်ကွယ်
အနုပညာသမား အမည်ခံ ပြည်သူချစ် ဆယ်လီဗျစ်တီတွေတောင်
ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတာ.. နိမ့်ပါးတဲ့ဘဝပေးကြောင့် (ရေသာခို အချောင်လမ်းလိုက်ချင်လို့လဲရှိတတ်လို့) မလုပ်ချင်ဘဲ လုပ်နေကြသူတွေကိုတော့ .. အင်း….
မိသားစု ထမင်းလုတ်.. မောင်ညီမလေးတွေ ကျောင်းစရိတ်အတွ ဘဝတွေကို S တစ်ခုနဲ့ လဲနေကြသူတွေကိုတော့ဖြင့်…..
တရားဝင်ဆိုတာကလည်း အဲ့လို လူတွေအတွက်ပဲလေ… ကိုယ့်ဘ၀အကျိုးပေးကြောင့် မလုပ်ချင်ဘဲ လုပ်နေရတဲ့ကြားထဲက တရားမ၀င်ဆိုတာကြောင့် ထပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကို ကာကွယ်ပေးချင်လို့ပါ…
မြင်ကွင်းလေး တစ်ခုကနေ ..
အတွေးစတစ်ခု ဆွဲထုတ်လိုက်တာ ..
စာတစ်ပုဒ်တောင် ရသွားတယ် …
ကျုပ်ကို ဂလို ရေးတတ်ဘူးရယ် …
အထက်ပါ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင်တော့ဗျာ …
ဘာမှ သိဘူးပေါ့ဗျာ .. အဟီးးး
ဖေ့စ်ဘုတ်..။ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေလိုက်ဖတ်တော့.. ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေ.. အာဏာပါဝါပြနေတာတွေများနေတာတွေ့ရတယ်..။သူတို့ကိုယ်သူတို့.. အမျိုးစောင့်သူများလိုလို…
ယူအက်စ်မှာ.. ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာပြည့်တန်ဆာတွေ လုံးဝ(လုံးဝ)ခွင့်မပြုဘူး..။ အန်ဒါကာဗာနဲ့..အပြင်းအထန်ဖမ်းတယ်.။
ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာတောင်မှ.. မြို့နေရာအကန့်အသတ်နဲ့.။ လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်တောင်နေရာရပ်ကွက်တချို့ကန့်သတ်ထားသေးတယ်..။
မြန်မာတွေ.. သူ့ပြည်နယ်..သူ့ဒေသ Rights တွေလေးစားပြီး.. လုပ်ချင်သူတွေ.. ဆန္ဒမဲယူ.. လုပ်ကြသင့်တာပေါ့..
ရန်ကုန်..မန္တလေး နေပြည်တော်လိုနေရာတွေမှာ ပြည့်တန်ဆာလောင်းကစား လုံးဝ(လုံးဝ) တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်မပေးသင့်ဘူးပေါ့..။
ဒေသဆိုင်ရာနယ်သားတွေ.. တဖက်နိုင်ငံသွားအလုပ်လုပ်နေရတဲ့.. ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်က… သယံဇာတနည်း.. ကုန်သွယ်ခက်တဲ့.. ပြည်နယ်..အဲဒီထဲက..မြို့..ရွာတခုခုကို ဆန္ဒကောက်ယူ.. သဘောတူရင်.. လိုင်စင်ချပေးလိုက်ယုံပါပဲ..။
အခွန်ကို.. ထိုင်းကကောက်နေတာရဲ့.. ၅၀ရာခိုင်နှုန်းပဲကောက်ရင်.. ထိုင်းက.. Sex tour ဈေးကွက်မြန်မာပြည်.. အဲဒီနေရာထဲရွေ့လာမှာပေါ့…
ပိုတော်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဆို.. မြန်မာအမျိုးသမီးဆို.. ပြည့်တန်ဆာလိုင်စင်နဲ့အတူတူ.. အခွန်ကြေးမတရားတိုးကောက်.. ထိုင်း..ကမ္ဘောဒီယား..ဗီယက်နမ်ပြည့်တန်ဆာတွေဆို.. လိုင်စင်နဲ့အခွန်လျှော့ကောက်…
ဒီလိုနဲ့.. တိုင်းပြည်လည်းဝင်ငွေရ.. နာမယ်လည်း မပျက်ဖူးပေါ့…။
ဂျပန်မှာ..တိုကျို- ရှင်းအိုးကုဘိုးရပ်ကွက်.. ပြည့်တန်ဆာရှာရင်.. ဂျပန်မဈေးနဲ့.. ထိုင်း၊ဖိလစ်ပင်းမဈေးမတူဘူး..။
မလုပ်တတ်တဲ့.. နိုင်ငံရေးသမား.. လွှတ်တော်အမတ်တွေ.. ဒီမှာလာဆွေးနွေးပါ..
အခမဲ့.. ဆွေးနွေးအကူအညီပေးမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း… ရယ်…။ :528:
တတိယစာပိုဒ်က ၁၀၀% agree. ကိုခင်ခပြောတာလည် agree ဖြစ်တယ်..ဒါပေမယ့်တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေအဖြူဆိုရင်ပြားပြာဝပ်ပြီးတော့ကန်တော့မယ့်အချိုးနဲ့ဆက်ဆံလိုက်ကြတာ…
ဖတ်မိမှတ်မိသလောက်ပြည့်တဆာဆိုတာ ဇိဇမာန ဘ၀မဖြစ်ခင်တုန်းကတောင်ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား…ပုထိုးတစ်ခုမှာ ဇိဇမာန ဖြစ်မယ့် ယောဂီ က တစ်ယောက်သောသူတံတွေးပြစ်ထားတာတွေ့တော့ သူက ဘယ်ပြည့်တဆာမပြစ်သွားလဲလို့ရေရွှတ်လိုက်မိတယ်…ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့် သူဟာနောက်ဆုံးဗုဒဘုရားပွင့်တဲ့ဘ၀မှာဒဲဒီဘ၀ရတာမဟုတ်ဘူးလား…
ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ကတော့ ပြည့်တဆာဆိုတာအရင်တုန်းကလဲရှိခဲ့တယ်..အခုလဲရှိတယ်…နောက်လဲရှိအုံးမှာဘဲ..မကောင်းဘူး မလုပ်ရဘူးလို့ပြောရင် လုပ်ချင်တာ စမ်းချင်တာလူ့သဘာဝဘဲ..ဒီတော့ ပြည့်တဆာလုပ်စားမယ့်သူကိုခွင့်ပြုလိုက်..ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက် Terms & Condition တွေရှိရမှာပေါ့… သဘောက ရပ်ကွက်တွေထဲ့မှာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်စားခွင့်မရှိ၊မပေးတော့သလို့ သူတို့အတွက်သီးသန့် Red light District (ဖာတန်း)လုပ်ပေးတာတို့…Proper Protection လုပ်ပေးတာတို့…Sex ကို တရားဝင်အလုပ်တစ်ခုအနေနဲနိုင်ငံကသတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ Sex Worker တွေကို ကျန်တဲ့ အလုပ်တွေလို သတ်မှတ်ပြီး Tax ကိုတိုးမကောက်တာတို့.. etc. ပေါ့..
သုည(Zero) မပေါ်ခင်ခေတ်က..သိတောင်မသိ.. သုံးတောင်မသုံးတတ်ခင်ခေတ်က.. လူသား..မှန်းတွေး.. လိုက်လို့မရတဲ့ဂဏန်းတွေနဲ့.. လုပ်(လုပ်)ရေး,ရေးထားတဲ့.. သမိုင်းစာတွေ..အကုန်အမှန်လို့.. မာန်ကြီးတခွဲသားနဲ့ မယုံကြစေချင်ပါဘူး…
အဲလိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဂဏန်းတွေ..ခေတ်တွေထည့်လာပြီဆို.. ဂေါတမဗုဒ္ဓလွန်ပြီးနောက်.. နှစ်ရာထောင်ချီမှ.. ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့.. လုပ်သမိုင်းတွေလို့မှတ်ပါ… မှတ်ပါနော.. :harr:
The oldest known text to useadecimal place-value system, includingazero, is the Jain text from India entitled the Lokavibhâga, dated 458 AD, where shunya (“void” or “empty”) was employed for this purpose. The first known use of special glyphs for the decimal digits that includes the indubitable appearance ofasymbol for the digit zero,asmall circle, appears onastone inscription found at the Chaturbhuja Temple[disambiguation needed] at Gwalior in India, dated 876 AD. There are many documents on copper plates, with the same small o in them, dated back as far as the sixth century AD, but their authenticity may be doubted.
ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ.. အင်မတန်လှတဲ့မိန်းကလေး.. ၀န်းကျင်တိုင်းပြည်က..မင်းသားတွေကနေ.. လိုချင်.. သိမ်းချင်တဲ့သူများသမို့.. ပြဿနာကြီးတွေတက်မလိုဖြစ်နေရာကနေ.. “ကဲ.. မိန်းမလှလိုချင်သူမင်းသားများ.. ညအလိုက်ခွဲဝေသုံးစွဲကြစေသတည်း” လို့.. သတ်မှတ်ပြီး.. ပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်.. တန်ဆာခံလုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့..အမျိုးကောင်းသမီးလေးကနေ.. အဲဒီနာမည်တွင်တယ်.. မှတ်မိပါတယ်..
့ပြည့်တန်ဆာခံ.. ဒါမှမဟုတ်.. တိုင်းပြည်ရဲ့အဖိုးတန်တန်ဆာ..လို့.. မှတ်ပါ… မှတ်ပါ.. တဲ့..။
Thailand: Buddhism, Society, and Women – Page 450 – Google Books Result
Alexandra R. Kapur-Fic – 1998 – Buddhism
While in Hindi language the word nagar means city, the word sobhini has different meanings. Shobha means praise, but sobhini can also mean beautiful. Hence it meansabeautiful woman who belongs to the city.
တန်ဆာတွေ ပြည့်နေသူ ….
အသည်း ယားထှာ ….
“အင်းစိန်လမ်းဘက်ကနေ ကွေ့ကြောယူထားပြီးစောင့်နေတဲ့ အငှားကားကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လမ်းလယ်ခေါင်မှာ အပြေးတစ်ပိုင်းငှားပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကမန်းကတန်းပဲ သူနဲ့ပါလာတဲ့လူကို ကားပေါ်အရင်ပေးတက်ပြီး သူက နောက်ကလိုက်တက်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ပါ။”
အဲဒီလိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့ Sex ကိစလို တန်းပြောနိုင်တာတော့ သိပ်မရှင်းဘူးဗျာ။
လုံမရေးထားတဲ့စာက ဟိုရောက်ဒီရောက် အတွေးတွေအတိုင်းရေးထားတာဆိုတော့ အဆင့်ကျော်သွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
တကယ်တမ်းက အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး Sex Tourism ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အတွဲတွေကို သွားမြင်မိတယ်… သူတို့ဆီက လိုင်စင်နဲ့လုပ်နေတဲ့သူတွေတောင် ဒီလိုအပြုအမူမျိုးမရှိကြတာကို သွားနှိုင်းယှဉ်မိတယ်..ပြောချင်တာက နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို ဦးစားပေးဖို့အရေး လမ်းလယ်ခေါင်မှာ လမ်းစည်းကမ်းကို ဖောက်ဖျက်သွားတာကို မဖြစ်စေချင်တာပါ..အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားရှေ့မှာ ပိုပြီးတော့တောင် စည်းကမ်းလိုက်နာသင့်တယ် ထင်လို့ပါ… (သူတို့ကို Sex ကိစ္စလို့ တန်းပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး..မရိုးသားဘူးလို့လည်း မစွပ်စွဲပါဘူး..)
အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသားတွေများလာတာကတစ်ဆင့် အသိဥာဏ်မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ကျွန်မတို့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရမှာ..ခုတုံးအလုပ်ခံရမှာ..လူမျိုခံရမှာကို ဆက်တွေးမိပြီး နောက်ဆုံး လိုင်စင်ကိစ္စကို အတွေးရောက်သွားတယ်ပေါ့..
လုံမအရေးအသားကြောင့် အဆင့်တွေကျော်ပြီး ကို P chogyi တွေးမိသလိုဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်..လုံမရေးတာ ညံ့လို့ပါ…
အဲဒီ့နေ့က လုံမလေးမွန်မွန် တွေ့ခဲ့တာက နိုင်ငံခြားသားနဲ့မို့ နိုင်ငံခြားသားကို ပစားပေးတယ်လို့ ကောက်ချက်ချလိုက်တာလား?
တကယ်လို့ မြန်မာအမျိုးသားဆိုရင်ရော ဘယ်လိုပြောမလဲဟင်..
Green Rose စိတ်ထင် ကားလမ်းပိတ်ဆို့နေတဲ့ အခြေအနေအရ အဲလိုဖြစ်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။
Green Rose ကိုယ်တိုင်လည်း ကားလမ်းပိတ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ကားငှားရတဲ့အခက်အခဲကို ကြုံနေရတာပါ။ ကားတွေက ကားလမ်းပိတ်တော့ တတ်နိုင်သရွေ့ လမ်းဘေးမကပ်တော့ပဲ လမ်းလယ်ကနေ မောင်းကြပါတယ်။ သွားစရာရှိလို့ ကားငှားချင်ရင် လမ်းဘေးကနေ ငှားနေလို့က တော်တော်နဲ့ မရတတ်ပါဘူး။ အဲဒီ့တော့ မီးပွိုင့်မိနေတဲ့ ယဉ်ကြောထဲက ကားတွေကိုပဲ ကားကြားထဲကနေ ဖြတ်လျှောက်ပြီး ငှားရပါတယ်။ ဈေးတွေဘာတွေလည်း သိပ်ဆစ်ချိန်မရပဲ နောက်ကကားတွေ ငြိုငြင်မှာစိုးလို့ ခပ်မြန်မြန် ကားပေါ်တက်ရပါတယ်။
Green Rose တွေးမိသလောက်တော့ အဲဒီ့ အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသားလည်း အဲလိုကြုံရတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Green Rose သာ အဲဒီ့အမျိုးသမီးနေရာမှာ ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည် ယနေ့အလေ့အထတွေအကြောင်း အထူးသဖြင့် ယဉ်ကြောပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာ ကြုံရတတ်တဲ့ အလေ့အထတွေ အကြောင်း မသိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို ဦးစားပေးအနေနဲ့ ကားပေါ်ကို အရင်တက်ခိုင်းမိမှာပါ။ မတော် ကိုယ်အရင်တက်ပြီး သူကနောက်ကနေ မြန်မြန်လိုက်တက်မလာပဲ ကားလမ်းမှာ ရပ်နေတုန်း တစ်ခုခု ဖြစ်သွားမှာ၊ တုံ့နှေးတုံ့နှေးလုပ်နေလို့ နောက်ကကားသမားတွေ မေတ္တာပို့တာတွေ ခံယူနေရမှာ တွေးပြီးတော့လေ။ နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်ပဲ နယ်ကနေလာတဲ့လူဆိုရင်တောင် အဲလိုပဲ ဦးစားပေးဖြစ်မှာပါ။
ဒါကတစ်ပိုင်း.. နောက်တစ်ပိုင်းက နိုင်ငံခြားသားတွေ အ၀င်များလာတဲ့အပေါ် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဆင်ခြင်ရမယ့်အပိုင်း.. အခုနောက်ပိုင်း အဲဒီ့ကိစ္စကို တော်တော်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ အကျယ်တ၀င့်မဟုတ်ပဲ လူတော်တော်များများရဲ့ အမြင်တွေကို မေးကြည့်မိတာပါ။ အဲဒီ့ကိစ္စက သေချာဆွေးနွေးရမယ့် အဖြေရှာရမယ့် ကိစ္စမျိုးပါ။
တကယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ မလွယ်ကူတာပါ။ အခု Green Rose တို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အမျိုးသားအရေအတွက်နဲ့ အမျိုးသမီးအရေအတွက် အချိုးအစားရယ်၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ လူမျိုးခြားတွေရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး လူဦးရေ အချိုးအစားတွေကြောင့်လည်းပါ ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုပိုပြီးကွာဟမှုရှိလာရင် ပိုပိုပြီးလူမျိုးပျောက်လာမှာပါ။ တခြားစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအကြောင်းတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်သလို၊ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် တိုင်းရင်းသား အိမ်ထောင်ဖက် ရှားပါးလာခြင်းက လူမျိုးခြားအိမ်ထောင်ဖက် များပြားလာခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
သူတို့ဒေသမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုကြတာ တော်တော်များပါတယ်တဲ့ အကြောင်းကတော့ သူတို့တိုင်းရင်းသား အမျိုးသားအများစုဟာ အလုပ်မလုပ်ကြလို့ပါတဲ့၊ တချို့ဆိုရင် မူးယစ်ဆေးပဲ သုံးစွဲနေကြတာဆိုတော့ သူတို့နဲ့အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အဲဒီ့ယောက်ျားတွေအတွက်ပါ ရှာဖွေကျွေးမွေး ရပါတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စား၊၀တ်၊နေ ရေးကို တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ပဲ အိမ်ထောင်ပြုကြတာများပါတယ်တဲ့။
တိုတိုပြောရရင်တော့ လူမျိုးမကွယ်ပျောက်ရေး၊ လူမျိုးအမြိုမခံရရေးဟာ.. မြန်မာ တိုင်းရင်းသား အမျိုးသားတွေရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။.. (ဒင်းတို့ တာဝန်မကျေလို့ သူများနောက် ပါပါသွားကြတာပေါ့.. ရှင်းရှင်းလေး… )
လှည်းတန်းမှာနေတဲ့ လုံမက လှည်းတန်းကားလမ်းအကြောင်းအသိဆုံးမို့ ကားပိတ်ပြီးအကြာကြီးစောင့်ရတဲ့ဒုက္ခကို နားလည်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့မြန်မာတွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေရှေ့မှာ စည်းကမ်းကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်စေချင်တာပါ…
ကျွန်မတို့တွေက တစ်ခါတစ်လေမှာ ဧည့်ဝတ်ကျေတာ လွန်ထွက်နေတယ်ထင်တယ်… အရမ်းကို ဂရုစိုက်လွန်းရင် သူတို့တွေက ရောင့်တက်ကြပါတယ်..
သူတို့နိုင်ငံမှာလည်း ကားလမ်းတွေပိတ်ဖူးမှာပါ.. ကားပိတ်တဲ့ဒုက္ခကို သူတို့လည်းနားလည်ပါတယ်.. ဆိုတော့..လမ်းလယ်ခေါင်မှာ မီးပွိုင့်ကကားကို အသည်းအသန်တားစီးမယ့်အစား သွားချင်တဲ့လမ်းဘက်ကို ကူးပြီး လမ်းမပေါ်က တားစီးရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်… သူက စီးချင်တယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်မတို့က ဒါမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့ ရှင်းပြရမှာပါ…
ပြီးတော့ အဲ့ဒီနေ့ကပုံက ဟိုနိုင်ငံခြားသားက ဘုမသိဘမသိနဲ့ နောက်ကလိုက်လာတဲ့ ပုံစံလည်း ပေါက်နေလို့ပါ..အစ်မပြောတာကိုလည်း နားလည်ပါတယ်နော်..
တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မတို့ ကြုံရပါတယ်.. ဟိုတယ် check-in ၀င်တဲ့အခါတွေမှာပေါ့.. သိကြတဲ့အတိုင်း official check-in – 12:00, official check-out – 14:00 ပါ….တစ်ခါတစ်လေ ဧည့်သည်တွေရဲ့လေယာဉ်က စောတဲ့အခါမှာ early check-in တောင်းတတ်ကြပါတယ်.. နားလည်ပါတယ်.. ရောက်ရင် အနည်းဆုံးတော့ အထုပ်လေးချပြီး နားချင်ကြတာပါပဲ.. ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ဟိုတယ်အခန်းတွေ အရမ်းကျပ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ early check-in မရရင် ဒါကို နားလည်ပေးရပါမယ်.. တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဧည့်သည်ရဲ့ favour ကို ရချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ မဖြစ်နိုင်တာတွေကို မရမကအတင်းအကျပ်တွေနဲ့ လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတွေရှိတတ်တော့ နောက်ပိုင်းဆို ဧည့်သည်တွေကရောင့်တက်ပြီး early check-in မှမရရင် complain လုပ်မယ့်ဒီဇိုင်းတွေရှိလာပါတယ်.. ဒီတော့ တစ်ခါတစ်လေ ဟိုတယ်တွေနဲ့ မျက်နှာပျက်ရတာတွေ ရှိလာရော..
ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ စည်းကမ်းက စည်းကမ်းအတိုင်းသွားတာပဲ ကောင်းပါတယ်…
အစ်မပြောတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကိုတော့ ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်…
ဒီကိစ္စအရင်ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် မလုပ်သေးတဲ့မိန်းကလေးတွေကော၊ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လေးတွေပါ ငါတို့အခွင့်အရေးနဲ့ငါတို့ဖြစ်ကုန်ပြီ ဒီအလုပ်ကသိမ်ငယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီး ငွေရလွယ်တဲ့လမ်းကိုချည့်များ
လေးမလုံမလေး အခုမှ လည်ပါတ်ရာပြန်လာလို့ အင်တာနက်ဖြစ်တယ်။
ပထမအချက် နိုင်ငံခြားသားကို ပြားပြားဝပ်နေသူတွေလဲရှိပါ။
သို့သော် ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လာရောက်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်သူအား ကူညီသည်ဆိုပါက
နောက် ပြည့်တန်ဆာကို တရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါက ၄င်းတို့ကို ကြားပွဲစား(ခေါင်းများ)က ဖြတ်ခုတ်သောဘေး
သို့သော် အစွဲမဖျောက်နိုင်သော လူများ၏ ခံယူချက်အရ
၄င်းမိန်းကလေးများ က တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်စားမည်ဆိုပါက
အကယ်၍ တရားဝင်လိုင်စင်ဖြင့်ခွင့်ပြုလိုက်ပါက ၄င်းတို့က အခွန်အခဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ုထိုအခါတွင်လည်းကိုယ့်ပစ္စည်းနှင့်ကိုယ်ရှာစားတာ သူများကိုအခွန်မပေးနိုင်ပါဘူးဟု ခံယူသောကြောင့်
(ဆန်ဖရန်အလည်သွားပြန်လာတော့..) ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ကတက်ခ်စီသမားနဲ့စကားပြောဖြစ်ရာမှာ.. အန်ဒါကာဗာ(အရပ်အ၀တ်အစားနဲ့..ရဲ) တွေအကြောင်းတော်တော်ကြားခဲ့ရတယ်..
ဥပဒေထုတ်.. လူထုကဥပဒေလေးစားလိုက်နာအောင်လုပ်ကြရာမှာ.. သာမန်ရဲတွေလောက်နဲ့မရပါဘူး..
မြန်မာပြည်မှာ.. ပြည့်တန်ဆာ..လောင်းကစားဥပဒေပြုဖြစ်..ထုတ်ဖြစ်ရင်.. အန်ဒါကာဗာတွေနဲ့.. တရားမ၀င်ဈေးကွက်ကို ရှင်းထုတ်ရင်.. ထင်တာထက်.. ဖြစ်လာမှာထက်.. တ၀က်လောက်လျှော့သွားမယ်ထင်ပါကြောင်း.. :harr:
သများရုံးကဘိုးဒေါ်နဲ့ အပြင်ကို၂ယောက်ထဲတည်းသွားရတဲ့အခါလည်းရှိတော့ သများကိုလည်းအဲ့လိုထင်ကြမားသိဘူးနော်
ဘောစိလာတုန်းကဆို သများနဲ့ သူတို့၂ယောက်
ကားပေါ်တက်တာမှာ ကိုယ်ကတံခါးဖွင့်ပေးပြီး သူ့အရင်တက်ခိုင်းရတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်
တခါတလေကျတော့ သူကတံခါးဖွင့်ပေးလို့ ကိုယ့်အရင်တက်ခိုင်းလို့ အရင်တက်လိုက်ရတာလည်းရှိပါတယ်
တခါတလေကျတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဦးစားပေးပြီး အရင်ဝင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်
အပြင်သွားရင်(တခါတလေ) လမ်းကူးရတဲ့အခါ ကားကိုရော ဘိုးဒေါ်ကိုပါကြည့်ရပါတယ်
သူ့ကို ကားတိုက်မလိုဖြစ်ဖြစ်သွားတာ ခဏခဏပါ
ကားတွေက ရှေ့ကြည့်နေတုန်း နောက်ကနေတိုးဝင်ချင်ဝင်တတ်တာကြောင့်ပါ
(သူဟာသူတစ်ယောက်တည်းသွားရင်တော့ သူ့ကိစ္စပေ့ါ) ကိုယ်နဲ့သွားရင်တော့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သလို ဂရုစိုက်ရပါတယ်
ကိုယ့်ထက်လည်မှန်းသိပေမဲ့ (ကိုယ့်ထက်လည်လို့ ကိုယ့်နိုင်ငံလာပြီး ကိုယ်တွေကိုခိုင်းစားနေမှန်းသိပေမဲ့)
ကိုယ့်နိုင်ငံလာတဲ့သူဆိုတော့ ဧည့်သည်လို့သဘောထားပြီး ၀တ္ထရားအရကူညီစောင့်ရှောက်ပါတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ဘာလိုလိုလား ရိုးရိုးသားသားလားဆိုတာ ကြည့်ရင်သိနိုင်မှပါပဲ